नेपाल आएको २४ घण्टा नबित्दै चिनियाँ टोली प्रमुखबारे भयो यस्तो खुलासा, देशभर हंगामा — Imandarmedia.com
१गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको खाली स्थानमा ३५ दिनभित्रै उपचुनाव गर्नुपर्ने
२के देउवाकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ला ?
३बाँके भेरी अस्पतालमा ३ घण्टामा ३ संक्रमितको मृत्यु
४कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, पार्टी हृवीप उल्लंघन गर्ने तीन प्रदेशसभा सदस्य बने मन्त्री
५सर्वदलीय बैठक सकियो, के के भयो निर्णय
६शहरी क्षेत्रका विद्यालयआगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस
७सर्वदलीय बैठकमा सभामुख विरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश
८साहित्यकार श्यामदास वैष्णवको निधन
९गर्मी बढेसँगै सर्लाही सदरमुकाम तराईकामा लामखुट्टेको प्रकोप ह्वात्तै बढ्यो
१०ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नजाने प्रचण्ड
११कस्तो छ आजको मौसम ? यी हुन् आज असिनासहित वर्षा हुन सक्ने स्थान
१२आईपीएल : धोनीको दुई सयौं खेलमा चेन्नाई विजयी
१मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय, नेपाल र प्रचण्ड तिनछक
२लकडाउनको हल्ला चलिरहेकै बेला होटल तथा रेस्टुराँका लागि आयो खुसीको खबर
३नेपाली कांग्रेसमा गयो पहिरो, सबैले पार्टी परित्याग गरेपछि गाउँ नै एमालेमय
४माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले दियो यस्तो कडा आदेश, देशभर तरंग
५पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका यी नेतालाई पक्राउ गर्ने तयारी भविष्य नै धरापमा
६देशै हल्लिने गरि नेपालमा गयो भूकम्पको शक्तिशाली धक्का, कहाँ हो केन्द्रबिन्दु ?
७प्रचण्डको पार्टीले गर्यो यस्तो निर्णय, माधव नेपाल खुसीले गदगद
८काठमाडाैं आउन चाहानेहरुका लागि आजदेखि लागु भयो यस्तो नयाँ नियम, हेर्नुहोस् सूचनासहित
९प्रधानमन्त्री ओलीले यी ३ शक्तिशाली अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि झाक्री टेन्सनमा
१०नेपालमा कहिलेदेखि हुँदैछ लकडाउन ? मन्त्रिपरिषद् बैठकले बल्ल गर्यो यस्तो निर्णय
११अब सिधै काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाइने, आजैदेखि लागु हुनेगरी बन्यो यस्तो नयाँ नियम
१२३ बुँदे सहमति उल्लंघन गर्दै ओली सरकारद्वारा नेकपा नेता गिरफ्तार
नेपाल आएको २४ घण्टा नबित्दै चिनियाँ टोली प्रमुखबारे भयो यस्तो खुलासा, देशभर हंगामा
काठमाडौँ । संसद बिघटन र सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक विवादले विभाजित भएपछि आकस्मिक रूपमा आइतबार काठमाडौं आएको चीनको विशेष प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख कुओ येचौ यसअघि पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच एकता हुनुअघि नेपाल आएको खुलासा भएको छ ।
२०७५ जेठ ३ गते २ पार्टीबीच एकता भएको थियो, उक्त एकताअघि कुओ येचौ नेपाल आएका थिए । २ पार्टीबीचको एकीकरण गराउन भूमिका खेल्न नै उनी नेपाल आएको त्यतिबेला विश्लेषण गरिएको थियो ।
अहिले एकता टुटेपछि पनि तिनै कुओ येचौ नेतृत्वको टोली नेपाल आएको छ। आइतबार नेपाल ओर्लिएको उक्त टोलीले आइतबारै साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौ, महानिर्देशक छुई यानसहितको ४ सदस्यीय टोली एयर चाइनाको चार्टर विमानबाट काठमाडौं उत्रनासाथ चिनियाँ दूतावासमा राजदूत हाउ यान्छीबाट वस्तुस्थितिको ‘ब्रिफिङ’ लिएर शीतलनिवासमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट गर्न पुगेको थियो । ‘झन्डै आधा घण्टा लामो भेटवार्ताको विषयवस्तुबारे जानकारी गराइएको छैन,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो उच्च प्रतिनिधिमण्डल आउनेबारे गत साता नै चिनियाँ राजदूत यान्छीले अवगत गराइसक्नुभएको थियो ।’
राष्ट्रपतिसँगको छलफललगत्तै प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेको थियो । ओली र चिनियाँ विशेष टोलीबीच भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले ट्वीटमार्फत जनाएका छन् । दुवै भेटमा राजदूत यान्छी पनि सँगै थिइन् । भ्रमणमा आएका विशिष्ट अधिकारीलाई उनीहरूकै चाहनाबमोजिम ओहदाअनुसारको एस्कर्टिङ र अंगरक्षक उपलब्ध गराइएको थिएन ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ दूतावासले पत्र लेख्दै ‘प्रोटोकलसहितको सुरक्षा’ दूतावास स्वयंले व्यवस्था गर्ने जानकारी गराएको थियो । विमानस्थलमा उत्रँदासमेत स्वास्थ्य सुरक्षाको सतर्कतासहित चिनियाँ नेताहरू पीपीई ड्रेस लगाएरै आएका थिए । उनीहरूलाई लिन राजदूत यान्छी विमानस्थल पुगेकी थिइन् । स्वागतका लागि परराष्ट्रका अधिकारी र नेकपाका नेताहरू कोही पनि उपस्थित थिएनन् ।
यान्छीले गत साता नै राष्ट्रपति भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेता माधवकुमार नेपाललगायतलाई भेटेर समसामयिक राजनीतिक वस्तुस्थितिबारे सरोकार राखेकी थिइन् । यसअघि पनि आन्तरिक विवाद र सत्ता बाँडफाँटको द्वन्द्वले नेकपा विभाजनको मुखमा पुग्न लाग्दा चिनियाँ राजदूत यान्छीले शीर्ष नेताहरूकहाँ गरेको ‘घरदैलो’ को कूटनीतिक वृत्तमा आलोचना हुँदै आएको छ ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताका पक्षमा देखिने गरी भूमिका निभाउँदै आएको चीनले यस पटक पनि विभाजित भइसकेको नेकपाका दुई घटकलाई पुनः एक गराउन यो हतारको ‘परामर्श भ्रमण’ गरेको आकलन छ । एकता र सहकार्यका निम्ति चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन्देश लिएर आएको ठानिएको यो टोलीको कम्युनिस्ट पार्टीबाहेकका प्रतिपक्षी र अरू दलका प्रतिनिधिसँग भेटघाट हुनेबारे खुलाइएको छैन ।
चीनका लागि पूर्वराजदूत डा. महेश मास्केका बुझाइमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च पदाधिकारी तहमा भएको यो भ्रमण आफैंमा ‘अर्थपूर्ण’ छ । ‘तर, यो प्रतिनिधिमण्डल कसको निमन्त्रणामा काठमाडौं आएको हो, खुलेको छैन,’ उनले भने, ‘काठमाडौं उत्रनासाथ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तहमा भेटवार्ता भएकाले सरकारी निम्तो वा स्वीकृतिमै भ्रमण भएको देखिन्छ ।’
मास्केका अनुसार सोमबारपछिका दिनमा यो विशिष्ट टोलीले गर्ने भेटघाटका आधारमा यो ‘हतारको भ्रमण’ को अर्थ र कारण प्रस्टिनेछ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र पार्टीगत विभाजन देखिएसँगै उत्तर र दक्षिणका दुवै छिमेकीको भूराजनीतिक चासो देखिने गरेको छ । चीनले आफ्नो तिब्बत भूमिसहितको सुरक्षा चासो र नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा देखिने गरी सरोकार राख्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्वमा आएको चार सदस्यीय टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।
आइतबार बेलुकी भएको भेटमा दुई देशबीचको हितका विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले जानकारी दिए। भेटमा येचौले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङ, महासचिव र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्ष २०२१ का लागि दिएको शुभकामना सन्देश सुनाएका थिए।
सो क्रममा उनले दुई देशका कम्युनिष्ट पार्टीको सम्बन्धका बारेमा चर्चा गरेका थिए। सल्लाहकार भट्टराईका अनुसार चिनियाँ टोलीले दुई देशबीच गहिरिदैं र झ्याँङ्गिदै गएको सम्बन्धमा खुशी व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूले दुई देश र दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच लामो समयदेखि परस्पर सम्बन्ध रहेको र आगामी दिनमा पनि जारी रहने बताएको उनको भनाइ छ। सम्बन्धले नयाँ उचाइ हासिल गर्दै जाने आशा चिनियाँ पक्षले सो भेटमा राखेका थिए।
भेटमा उपमन्त्री कुओ येचौले नेपाल चीनको निकट छिमेकी र मित्र रहेको बताएका थिए। उनले चीनले नेपाललाई हरेक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको र यो भविष्यमा पनि जारी रहने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
उनले दुबै तर्फबाट एकअर्को मुलुकमा विगत तथा हालमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई बुझ्न सहयोग गरेको र यसले मुलुक र नागरिक स्तरमा सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने उल्लेख गरेको भट्टराईले बताएका छन्।
भेटवार्तामा उक्त टोलीले नेपालले लिदैं आएको एक चीनको नीतिलाई दोहोर्‍याउँदै आफ्नो भूमि चीनविरूद्ध प्रयोग गर्न नदिएको कुरा स्मरण गर्दै नेपालको प्रशंसा गरेका थिए। यसका लागि उनले नेपाल र नेकपालाई धन्यवाद समेत दिएका छन्।
त्यस्तै येचौ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गरेको छ । भेटवार्ताका लागि चिनियाँ टोली प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेको छ । भेटमा नेकपाको विभाजन, संसद विघटन लगायतका समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको बुझिएको छ ।
नेपालको राजनीतिमा चिनियाँ हस्तक्षेप
आम नेपालीले उत्तरी छिमेकी चीनलाई असल मित्रको रूपमा हेर्दै आएका छन् । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताको सम्मान गरेकोमा नेपालीहरू तुलनात्मक रूपमा चीनप्रति सकारात्मक धारणा राख्छन् । चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहल्यै हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने विश्वास रहिआएको हो । नेपालीको चाहना पनि यही हो ।
यता चीनले पछिल्लो कालखण्डमा नेपालको राजनीतिमा चासो र हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको छ । खासगरी केपी शर्मा ओलीको पहिलो शासनकालदेखि चीन नेपालमा निकै सक्रिय भएको छ । नेपालका राजनीतिक घटनाक्रममा चीन चनाखो र सक्रिय देखिन थालेको छ ।
दुई तिहाइ नजिक बहुमत हासिल गरेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कृत्रिम एकता हुनमा पनि चीनकै प्रभाव थियो । अहिले विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । विभाजनबाट जोगाउन पनि चीनले सक्रियता देखाएको हो । एकताको तीन वर्षमा नेकपाभित्र विभिन्न आरोहअवरोह आए ।
विभाजन नै भइहालेको थिएन । कुनै विवाद आउँदा चिनियाँ राजदूतको दौड सुरु भइहाल्थ्यो । यस मामिलामा उनले कूटनीतिक मर्यादा पनि खाल गरिनन् । नेकपाको विवाद मिलाउन सक्रिय हुन्थिन् । उनले आफूले चाहेकै समयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट पाउँछिन् । यो सिलसिला विभाजनको अवस्थामा पनि निरन्तर छ ।
अहिले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येचौको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली काठमाडौँमा छ । राजदूतको प्रयास सफल नभएपछि उच्च चिनियाँ नेता आएको भन्ने टिप्पणी नेपालमा भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेसँगै नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो । झन् अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा पुग्नुले नेकपाको ओली समूह तथा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको गठबन्धनका बीच ठूलो अविश्वास सिर्जना भयो । हुँदाहुँदा पार्टी विभाजन नै भयो ।
आफ्नै पहल र दबाबमा नेपालमा बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको परिकल्पना गरेर दुई पार्टीको एकताको खाका कोरेको चीनका लागि नेकपाको विभाजन अविश्वसनीय र अस्वीकार्य थियो । हरेक विवाद मिलाउन सहजीकरण गर्दै आएको चीन यसपालि भने असफल भयो । अहिले नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजन भइसकेको छ । ओली र प्रचण्ड नेकपा नामकै दुई पार्टीका अध्यक्ष छन् । प्रचण्डले ओलीलाई निकालेर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएका छन् । राजनीतिक विभाजनपछि कानूनी प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
फेरि पनि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियता बढेको छ । कूटनीतिक मर्यादा नाघेर उनको दौडधुप नेताको घरदैलोमा केन्द्रित छ । उनले प्रतिनिधिसभा भङ्गपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपाका नेताहरू प्रचण्ड र नेता माधव नेपालसँग भेट गरिसकेकी छन् ।
उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा तथा प्रचण्डतर्फका नेताहरू वर्षमान पुन र कृष्णबहादुर महरालाई पनि भेटिन् । राजदूत यान्छीले अझै पनि केपी ओलीसँग मिल्न इतरका नेताहरूमाथि दबाब बढाएकी छन् । त्यतिमात्रै होइन, इतर समूहमा को महासचिव हुने भन्ने विषयमा पनि चीनको चासो देखिएको छ । केन्द्रीय कमिटीबाट महासचिवमा सुरेन्द्र पाण्डे अनुमोदित हुँदै थिए । त्यसअघि चिनियाँ राजदूतले प्रचण्डलाई भेटेर पाण्डेको विपक्षमा दबाब दिइन् । यही कुरा माधव नेपाललाई पनि भनिन् । पार्टीको निर्णय रोकियो ।
चीन विश्वका धेरै देशले अस्वीकार गरेको बीआरआई प्रोजेक्ट लागु गर्न, अमेरिकी एमसीसी असफल गराउन र राजनीतिक रूपमा नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहन्छ । त्यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पसेको प्रष्ट छ । राजदूत यान्छीको गैरकूटनीतिक सक्रियता पनि यसकै लागि हो ।
सुरुवाती चरणमा त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागले नेकपाका नेताहरूलाई प्रशिक्षण नै दिएको हो । चिनियाँ नेताहरूले चीनको निरंकुश शासनबारे पढाएर नेपालमा पनि त्यस्तै प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गरेका हुन् । चीनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लागि बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन चाहेको छ ।
यता त्यही चीनले कोरोना भाइरसको निहुँमा पारवहनका नाकाहरू बन्द राखेको छ । भूकम्पदेखि बन्द रहेको तातोपानी नाकामा चीनले बारम्बार अवरोध गरिरहेको छ । एकातिर बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको परिकल्पना गर्ने र अर्कोतिर त्यही पार्टीको सरकार हुँदा पनि सहयोग नगर्ने चिनियाँ रणनीति अचम्मको छ ।
कुनै समय नेपालको राजनीतिमा भारतले माइक्रो मेनेज्मेन्ट गरेको भनेर आरोप लगाउने नेताहरू चिनियाँ राजदूतलाई भेट दिन आतुर देखिन्छन् । नेताहरूको यही प्रवृत्तिका कारण चीन नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप बढाउन सफल हुँदै गएको हो ।
नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा चिनियाँहरू सफल भएका छन्, त्यो हुम्लामा सीमा मिचिएको प्रकरणमा होस् वा सगरमाथाको उचाइ नाप्ने र सार्वजनिक गर्ने विषयमा होस् । कम्युनिस्ट सरकार पूर्ण रूपमा चीनको स्वार्थअनुकूलको सहयोगी बन्यो । हुम्लामा चिनियाँ पक्षबाट जमिन कब्जा भएको कुरा उठ्यो । नेपाल सरकारले सर्वे नै नगरीकन चीनकै हो भनिदियो । यो प्रकरणमा कम्युनिस्ट त बोलेनन् नै । आफै पुगेर, अनुगमन गरेर सीमा मिचिएको ठहर गरी प्रतिवेदन बुझाएका कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीलाई चीनले ‘भारतीय दलाल’ भनिदियो ।
सगरमाथामा उचाइ सार्वजनिक गर्नमा पनि नेपालको कम्युनिस्ट सरकार पूर्ण रूपमा चीनमा निर्भर रह्यो । सगरमाथाको उचाइ आफैँ मापन गरेको सरकारले परिणाम सार्वजनिक गर्न चीनको स्वीकृति पर्खियो । सगरमाथाको चचुरो नेपालको हो भने उचाइ मापनको परिणाम सार्वजनिक गर्न किन चीनलाई पर्खिनु परेको हो भन्ने विषयमा सरकार मौन बस्यो । प्रश्न थयावत छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई आफ्नो प्रभावमा राखेर नेपालमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको दबाब सिर्जना गर्न चीन सफल हुँदै गएको छ । निकै ठूलो प्रयास गरे पनि उसले नेकपाको विभाजन भने रोक्न सकेन । अझै पनि चिनियाँ महामहिमको दौड चलिरहेको छ । पछिल्लो प्रकरणमा राजदूतको पहल सार्थक नभएपछि बेइजिङबाटै उच्चस्तरीय टोली पनि काठमाडौँ आएको छ । टोलीले विभाजित नेकपाका दुवै खेमाका नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको कुरा सञ्चार माध्यमहरूमा आएको छ ।
अहिले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येचौको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली काठमाडौँमा छ । राजदूतको प्रयास सफल नभएपछि उच्च चिनियाँ नेता आएको भन्ने टिप्पणी नेपालमा भइरहेको छ । एउटा छिमेकीको राजनीतिक घटनाक्रम अर्को छिमेकीले नियाल्नु अन्यथा होइन तर आफ्नो चाहनाअनुसार दबाब दिनु सोझै हस्तक्षेप हो । यसरी नेपालमाथि चीनको हस्तक्षेप बढेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको खाली स्थानमा ३५ दिनभित्रै उपचुनाव गर्नुपर्ने
के देउवाकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ला ?
बाँके भेरी अस्पतालमा ३ घण्टामा ३ संक्रमितको मृत्यु
सर्वदलीय बैठक सकियो, के के भयो निर्णय
शहरी क्षेत्रका विद्यालयआगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस
साहित्यकार श्यामदास वैष्णवको निधन
गर्मी बढेसँगै सर्लाही सदरमुकाम तराईकामा लामखुट्टेको प्रकोप ह्वात्तै बढ्यो
भारतबाट फर्किएका १५ जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
अमेरिकाले रुसी संस्था र अधिकारीमाथि लगायो प्रतिबन्ध
तपाई एक महिनामै सुन्दर देखिन चाहनुहुन्छ ? आजैबाट सेवन गर्नुहोस यस्ता चिज